आलस कसरी खाने ? के के बन्छ ? नियमित सेवन गर्दा आलसबाट पाइने फाइदा यस्ता छन् - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
केके पाइन्छ आलसमा : एक चम्चा अर्थात् १५ ग्राम आलसमा निम्न तत्वहरु पाइन्छ।
– मुटुसम्बधी रोगीका लागि पनि नियमित आलस सेवन गर्नु उत्तम मानिन्छ। खाना पचाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।
– नरम र सिल्की कपालका लागि पनि आलस अति उपयोगी छ। आलसले मुटुका धमनीहरूमा रगत जम्नबाट जोगाउँछ। कब्जियत, पाइल्स, फिस्टुलाका बिरामीलाई फाइदा गर्छ। छालासम्बन्धी रोगहरू एग्जिमा, डन्डीफोर, दाद, चिलाउने आदि हटाउँछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाइरहेको हुन्छ।
– रातो रक्तकोष निर्माण र मस्तिष्क एवं स्नायुको कार्यप्रणालीमा सहयोगी हुने भएकाले यसको उपयोग आवश्यक मानिन्छ। आलसमा पाइने लिग्नान्सको इस्ट्रोजेनिक गुणले महिलाको महिनावारीमा हुन सक्ने तलमाथिलाई पनि नियमित बनाउन मद्दत गर्छ। स्त न, प्रोस्टेट, कोलोन, पाठेघर क्यान्सरका बिरामीले आलस खानु राम्रो मानिन्छ।
आलस धेरै किसिमले खान सकिन्छ। यसलाई अंकुराएर खाँदा पनि हुन्छ। आलसको छोप बनाएर पनि खान सकिन्छ। आलु–काँक्रोको अचारमा तिलको साटो आलास मिलाउनु उत्तम मानिन्छ। आलसलाई भिजाएर विभिन्न फलफूलसँग मिसाई लस्सी बनाएर पिउन पनि सकिन्छ।
आलसको सुप पनि अत्यन्त स्वास्थ्यकर मानिन्छ। सलादको ड्रेसिङ बनाएर खाँदा पनि स्वादिस्ट र स्वस्थ्यकर हुन्छ। बर्गरको बन या अन्य ब्रेड बनाउँदा आलसको गेडा हालेर बनाउन सकिन्छ। आलसको तेल प्रयोग गरेर विभिन्न खाना पकाउन सकिन्छ। विभिन्न पिठोमा आलस मिसाएर रोटी पनि बनाउन सकिन्छ। दही र महमा मिसाएर पनि खान सकिन्छ।
आलसलाई विभिन्न तरिकाले खान सकिन्छ।
जस्तैः दुध वा दहीसँग मिसाएर खान सकिन्छ।
दहीसँग खाँदा स्वादअनुसार मह मिसाउन सकिन्छ।
घरमै रोटी, बिस्कुट, केकरमफिन बनाउँदा आलसको पिठो मिसाउन सकिन्छ।
आलसलाई ३०० डिग्री फरेन्हाइट (झन्डै १५० डिग्री सेल्सियस) मा ३ घन्टासम्म बेक गर्दा यसमा भएको एएलए ओमेगा–३ मा केही असर नपरेको विभिन्न अध्ययनबाट देखाएको छ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, फाल्गुन २३ २०७७ २२:२२:४८